ဧရာ Hogweed / hogweed - အဆိပ်အပင်
အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီး hogweed ကိုလည်းနာမကိုအမှီဧရာ Hogweed သို့မဟုတ်ဝံလက်သည်းအောက်မှာလူသိများသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီး hogweed Doldenblüterများ၏စက်ရုံမိသားစုထံမှဖြစ်ပါသည်နှင့်ကော့ကေးဆပ်ပြည်နယ်ကနေမူလကလာပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကဒီမှာဥရောပမှာပေါ်တွင်စက်ရုံ 1985 ထင်ရှား။ ,
Hogweed / ဧရာ hogweed
အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီး hogweed အထိသုံးမီတာတစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစားကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ တည်ဆဲကို stem မှောင်မိုက် mottled သည်နှင့်မြေတပြင်လုံးစက်ရုံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဒဏ်ငွေဆံပင်ရှိပါတယ်။
ယင်းဝင်ရိုး၏အချင်းအပင်များ၏စုစုပေါင်းအရွယ်အစားပေါ် မူတည်. နှစ်ခုမှဆယ်စင်တီမီတာဖြစ်ပါသည်။ ဧရာ hogweed ရဲ့အစိမ်းရောင်အရွက်ယေဘုယျအားဖြင့်တဦးတည်းမီတာတစ်အရှည်ရှိသည်။ အဆိုပါအတော်လေးကြီးမားတဲ့ပန်းပွင့်များသောအားဖြင့် 30-50 စင်တီမီတာတစ်ဦးချင်းရှိသည်။ တစ်ဦးကဧရာ hogweed တစ်ခုတည်းပန်းပွင့် 80.000 အထိဆံ့နိုငျသညျ။
အဆိုပါပန်းပွင့်ကာလဇွန်လကနေဇူလိုင်လကုန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ပန်းပွင့်စင်တီမီတာ2နှင့်ထိပ်ဆီသို့ဆိတ်ကွယ်ရာကျယ်ပြန့်ကြီးထွားအထိတစ်ဦးချင်းရှိသည်။ ယင်းအမွေးအဖြူစာရွက်များဝံ၏တိရိစ္ဆာန်ခွကေိုအလွန်ဆင်တူတွေ့မြင်ကတည်းကစက်ရုံကြောင်းအကြောင်းပြချက် hogweed အမည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသီးအပွအမျိုးခွံကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုံသေဆုံးသည်။ စက်ရုံရင့်ကျက်မပါဘူးဆိုရင်, သူကအလွယ်တကူနှစ်ပေါင်းများစွာရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ hogweed ၏အစေ့အနှစ်များအတွက်အများဆုံးအလားအလာရှိပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီး hogweed အက်ဆစ်မြေဆီလွှာပေါ်တွင်ကြီးထွားမထားဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလွန် undemanding သည်နှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့နှစ်ပေါင်းအဘို့ကိုသာနည်းနည်းနေရောင်န်းကျင်လိုအပ်သည်။
ဒါခေါ်ဧရာမ hogweed furocoumarins တွင်အသားအရေအဆက်အသွယ်ပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာအရေပြားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
အရေပြားလာခြင်းမှသိသိသာသာအလုံအလောက်နိုင်အရွက်နှင့်အတူတောင်မှအကျဉ်းအဆက်အသွယ်။ ပိုဆိုးကိစ္စများတွင်ပင်အရေပြားအပေါ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်သှ။ ဤရွေ့ကားအလွန်နာကျင်ဖြစ်ကြပြီးလွယ်ကူစွာမီးဖမ်းခြင်းနှင့်ပထမနှင့်ဒုတိယဒီဂရီ၏မီးလောင်ဒဏ်ရာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အသားအရေယားယံခြင်း, အရည်ကြည်ဖုအဖျားငိုကြွေးခြင်းအပြင်, သွေးလည်ပတ်မှုပြဿနာတွေနဲ့ချွေးတလည်းရလဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုပတ်ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
သင်စက်ရုံနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွတော်မူတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ရေဆပ်ပြာနှင့်အတူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သက်ဆိုင်ရာအရေပြားကိုဆေးကြောသင့်ပါတယ်။ အသားအရေယားယံဖြစ်ပေါ် အကယ်. သင့်လျော်သောကုသမှုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်, ထိုအရေပြားအထူးကုဆရာချက်ချင်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဥရောပမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီး hogweed hogweed မြက်ခင်းမတူဘဲဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ကျနော်တို့ဘဏ်နှင့်မြောင်းမှာဧရာမ hogweed ရှာဖွေစိုထိုင်းသော, မြည်းကြိုးကိုဖြည်မြေပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အမြင်အာရုံ, နှစ်ဦးစလုံးပင်များအလွန်ဆင်တူကြည့်ရှုပါ။
စက်ရုံငယ်ရွယ်ဖြစ်လျှင်, သူမ၏အဆိပ်ရန်မစွန့်စားမှုလည်းမရှိ။ မကြာခဏဆိုသလိုအရွက်ကိုမကြာခဏတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ဒီမဟုတ်ရင်ပေါ်ထွန်းအသားအရေယားယံဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်သို့သော်တိရိစ္ဆာန်များကသိပ်မရသင့်ပါတယ်။ ထိုလုလင်သည်စက်ရုံ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်. ပင်စည်ကုန်ကြမ်းကိုစားနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး compote သို့ချက်ပြုတ်။
Ambrosia - အဆိပ်အပင်
- သစ်ခွစောင့်ရှောက် Sun ကသူတို့ရဲ့သစ်ခွပွင် | ...
လသာဆောင်အပင် - ထိုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူအမှားများ | ...
လသာဆောင်အပင် - စောင့်ရှောက်မှုသိကောင်းစရာများ | ဥယျာဉ်တော်အပင်
မှန်ကန်စွာစိုက်လသာဆောင်စက်ရုံများ | ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်ကို
| ရသောလသာဆောင်များအတွက်သာဆောင်အပင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်ကို
လသာဆောင်အပင်သိကောင်းစရာများ | ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်ကို
တော်ပါတယ် | အိမ်တွင်စက်ရုံစောင့်ရှောက်မှု
တော်ပါတယ် | အပင်ပန်းပွင့်အဘို့5အကြံပေးချက်များ
Easy-စောင့်ရှောက်မှုတော်ပါတယ် | စက်ရုံ
အနိမ့်အလင်းများအတွက်မိုးလုံလေလုံအပင် | စက်ရုံ
မိုးလုံလေလုံအပင် - အပင်ပိုးမွှား